प्राथमिकताहरू क्रममा प्राप्त गर्दै, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
धेरै व्यक्तिहरू - हामी जो पास्टरल सेवकाईमा रहेका छन् - गलत ठाउँमा खुशीको खोजीमा छन्। पास्टरहरूको हैसियतमा हामी उनीहरूलाई ठूलो चर्च, अझ प्रभावकारी सेवकाई र प्रायः हाम्रा सहकर्मी वा चर्चका सदस्यहरूको प्रशंसामा भेट्न चाहन्छौं। जे होस्, हामी यसलाई व्यर्थमा गर्छौं - हामी त्यहाँ रमाईलो भेट्दैनौं।
गत हप्ता मैले तपाईंसँग के सोच्छु कि मलाई लाग्छ के क्रिष्टियन सेवा किलर - कानूनीतामा नम्बर एक हो। म दृढ विश्वास गर्दछु कि गलत प्राथमिकताहरू तुरुन्तै त्यसको पछि लाग्छ। फिलिप्पीहरूलाई लेखेको पत्रमा पावल आफ्नै प्राथमिकताहरूबारे बताउँछन्। उनले भने: तर मैले हासिल गरेको कुराचाहिँ मैले ख्रीष्टको लागि हानिकारक ठानेँ। हो, म अझै पनि यो प्रभु येशू ख्रीष्टको विस्मयकारी ज्ञानलाई सबै हानि सम्झन्छु। यी सबै कुराले उसको खातिर मलाई हानि पुर्‍याएको छ, र म यसलाई ख्रीष्टलाई जित्न लायकको ठान्छु (फिलिप्पी 3,7: --8)
यो पावलको नाफा र नोक्सान खाता हो। जे होस्, उनी भन्छन्: म येशूको ज्ञानको लागि हानिकारक हुन सक्ने एउटा फाइदा हो भनेर म विचार गर्दछु। यदि तपाई येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्वमा पूर्णतया केन्द्रित हुनुहुन्न भने, तपाईको प्राथमिकताहरु सन्तुलन भन्दा बाहिर हुन्छन्, यदि तपाईले उहाँलाई अरु तुलना गरी अरु तुलना गर्नु भएन भने। यो एउटा कारण थियो जब उनले जेलमा रहेको भए पनि उनले खुशीलाई हेरेका थिए जब उनले यो पत्र लेखेका थिए।
हामी यो वाक्यांश हेरौं: म ख्रीष्टलाई जित्नको लागि सबै फोहर विचार गर्दछु। शब्द फोहोरलाई ड्रपिंगको रूपमा पनि अनुवाद गर्न सकिन्छ। पावल हामीलाई भन्छन् कि हामीसंग सबै थोक येशू भन्दा बेकार छ। प्रसिद्धि, पैसा, वा शक्तिले येशूलाई चिनेको साधारण आनन्दलाई कहिलै पनि बदल्न सक्दैन।
यदि तपाईले प्राथमिकताहरू क्रमशः राख्नु भयो भने तपाईले सेवामा आनन्द पाउनुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण नभएको कुरामा खुशी नहुनुहोस्। ख्रीष्ट महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। त्यहाँ धेरै कम महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जुन तपाईंको चर्च सेवामा तपाईंको आनन्द गुमाउन सक्छ। मानिस आफूले चाहेको कुरा गर्दैन। तिनीहरू देखा पर्ने छैनन् जब तिनीहरू तपाईंको इच्छा जस्तो देखिन्छन्। तिनीहरूले मद्दत गर्दैन जब तपाईं सहायता गर्नु पर्छ। मानिसहरूले तपाईंलाई निराश पार्नेछन्। यदि तपाईंले यी चीजहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो भने, तपाईं सजिलै आफ्नो आनन्द गुमाउनुहुनेछ।
पावल हामीलाई यस पत्रमा भन्छन् कि तपाईलाई कस्तो किसिमको पुरस्कार, तपाईको चर्च कती ठूलो छ वा कति पुस्तकहरु तपाईले लेखेका छन् भन्ने फरक पर्दैन - तपाईको सेवामा यी सबै पाउन सक्छन तर पनि दुखी हुनुहोस्। फिलिप्पी 3,8: in मा पावलले औँल्याउँदछ कि जीवन चीजहरूको आदानप्रदानबाट हुन्छ। उनले ख्रीष्टमा पाउनुपर्ने सबै हानिलाई विचार गरे।
येशूले आदानप्रदानको बारेमा अर्को कुरा भन्नुभयो। उनले हामीलाई भने कि हामी दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौं। हामीले निर्णय गर्नु पर्छ कि कुन वा हाम्रो जीवनमा नम्बर एक हुनेछ। हामी मध्ये धेरैले येशू र अरू केहि चाहान्छौं। हामी चर्चको काममा परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छौं, तर एकै साथ हामी अरू चीजहरू पनि पक्रिराख्छौं। पावल हामीलाई भन्छन् कि हामीले ख्रीष्टलाई चिन्नको निम्ति यी सबै थोक त्याग्नुपर्दछ।
हाम्रो प्राथमिकताहरू मिसाइएको कारण र हाम्रो सेवकाई आनन्दमय छ किनकि हामीलाई थाहा छ कि हामीले वास्तवमा ख्रीष्टको लागि बाँच्नको लागि केही चीज त्याग्नु पर्छ। हामी डराउँछौं कि हामी प्रतिबन्धित हुनेछौं। तर हामी यथार्थताबाट भाग्न सक्दैनौं। जब हामी येशूकहाँ आउँछौं, हामी सबै कुरा त्याग्छौं। अनौठो कुरा यो हो, जब हामी त्यो गर्छौं, हामी पाउँछौं कि हामीसँग त्यस्तो राम्रो कहिल्यै थिएन। हामीले उसलाई दिएका चीजहरू उसले लिन्छ र उसले यसलाई सुधार गर्छ, यसलाई पुनः आकार दिन्छ, नयाँ अर्थ थप गर्दछ, र यसलाई हामीलाई नयाँ तरिकाले फिर्ता दिन्छ।
इक्वेडरमा भारतीयहरूले मारेका मिसनरी जिम इलियटले भने: उनी मूर्ख होइनन् जुन आफुले गुमाउन नसक्ने कुराको लागि राख्न नसक्ने कुरा दिन्छ।
त्यसोभए के तपाईं हार मान्न डराउनुहुन्छ? तपाईंको जीवन र सेवामा के गलत गलत प्राथमिकता भएको छ? के ख्रीष्टसँगको सम्बन्ध चर्चको लक्ष्यले बदलिएको छ?
यो तपाइँको प्राथमिकताहरू पुन: व्यवस्थित गर्न को लागी समय हो - र तपाइँको आनन्द फेला पार्नुहोस्।
रिक वारेन द्वारा